samedi, 20 juillet 2019 17:36
Bisikilety – Lalaon’ny Nosy: Nahazo medaly alimo i Madagasikara
Tao anatin’ny fe-potoana 52minitra sy 7 segondra no nahavitan’ny ekipa malagasy, rafetin’i Mazony, Emile, Nambinina Herman ary Dama ny halaviran-dalana mirefy 38.6km tamin’ny hazakazaka am-bisikilety amin’ny adim-pamantaranandro isan-tarika androany. Mametraka azy eo amin’ny laharana fahatelo, aorian’ny ekipa maorisianina ka nahazoana medaly alimo, tamin’ity lalaon’ny Nosy andiany faha-10 atao atsy amin’ny nosy Maorisy ity.
Anio ny andro voalohany amin’ny dingan’ny fifanintsanana, iadiana ny medaly volamena amin’ny Lalaon’ny Nosy andiany faha-10, amin’ny taranja baskety, tanterahina ao amin’ny Gymnase Phoenix amin’ny nosy Maorisy. Raha ny fandaharam-potoana anio sabotsy 20 jolay ity, dia : 10ora - La Réunion # Maldives (lehilahy) 12.30 ora - Madagascar # Seychelles (lehilahy) 3 ora tolakandro - Maurice # Comores (vehivavy) 5.30 ora tolakandro - Maurice # Comores (lehilahy)
Tanterahina anio alina ao amin’ny « Stade international du Caire », Egypta, izay mahazaka mpijery 75 000, ny lalao famaranana iadiana ny Amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra. Hifandona amin’izany famaranana izany i Alzeria sy Sénégal. Tsy mbola nahazo ity amboara ity ny Senegaley. Efa nahazo ny Amboara kosa ny Alzeriana tamin’ny taona 1990. Manatombo ara-taratasy ny Senegaley. Faha-22 manerantany amin’ny fandaharana navoakan’ny FIFA tamin’ny jona 2019, ary Voalohany aty Afrika i Sénégal raha toa ka faha-68 manerantany ny Alzeriana. Ny baolina anefa boribory, ary 90 minitra ny faharetan’ny lalao ara-dalàna, aorian’izay no hamantarana izay handrombaka ny Amboara an’i Afrika amin’ny baolina kitra andiany faha-32 ity.
Notanterahina androany tao Caire, renivohitr’i Egypta ny fisarihina hahatongavana amin’ny dingana famaranana ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra, andiany faha-33 hatao any Cameroun amin’ny taona 2021. Nozaraina anaty vondrona miisa 12, izay ahitana ekipa 4 avy ny mpifaninana, ka izay tafavoaka amin'ny lalao savaranonando mandroso sy miverina ny efatra amin'ireo. Tafakatra avy hatrany amin’ny dingana famaranana i Cameroun noho izy mpampiantrano. Mandritra ny enina andro, lalao mandroso sy miverina, ny fifanintsanana anaty vondrona hahazoana ny tapakila ho any Cameroun. Ekipa roa isaky ny vondrona aorian’ny enina andro ifanintsanana no tafakatra amin’ny dingana famaranana.
Nigadona atsy Maorisy androany tolakandro ny delegasiona malagasy hiatrika ny Lalaon'ny Nosy, izay hisokatra ofisialy ny zoma 19 jolay. Amin’ny sabotsy 20 jolay no hiatrika ny lalao voalohany manoloana an'i Seisela ny Barea an’i Madagasikara. Androany dia resin’i Mayôty 2 noho 0 i Comores, nirava sahala 1 noho 1 kosa i Seisela sy Maorisy mampiantrano.
Miisa 36 ny Atleta malagasy izay handray anjara amin’ny taranja atletisma, mandritry ny Lalaon’ny Nosy hatao atsy amin’ny Nosy Maorisy. Nitso-drano sy nanolotra 5 tapitrisa Ariary, ho vatsy entin’ireto Atleta malagasy izay hiaro ny voninahim-pirenena ireto androany, ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola mpiahy ity taranja ity, Richard Randriamandrato. Efa nisy 10 tapitrisa Ariary natolony tamin’ny volana aprily lasa teo nandritry ny famondronana voalohany ireo Atleta ireo. (Jereo Sary Tohiny)
Mpilalao 12, miampy mpanazatra sy mpitsara, no mandrafitra ny delegasiona malagasy amin’ny taranja tenisy ambony latabatra, hiatrika ny lalaon'ny Nosy hotanterahina atsy Maorisy ny 19 hatramin'ny 28 jolay ho avy izao. Ny filohan'ny federasiona Ambinintsoa Herley no hitarika azy ireo, hiainga anio tolakandro. Ny 20 hatramin'ny 28 jolay no hiantsehatra ireo mpilalao tenisy ambony latabatra. Nanolotra 10 tapitrisa ariary ho vatsin-dalana sy fanohanana an’ireto mpanao fanatajahan-tena ireto, ny Minisitry ny harena an-kibon'ny tany sy ny loharanon-karena stratejika, Fidiniavo Ravokatra, izay mpiahy ity taranja ity, androany, teny amin'ny Mining Business Center (MBC) Mamory Ivato mialohan'ny hihazoan'izy ireo ny Nosy Maorisy. Efa nanolotra 6 tapitrisa Ariary ny minisitra tamin'ny famondronana ireo mpilalao tany am-boalohany. Nampanantena sahady ity minisitra mpiahy ity fa omena tambiny manokana ireo mpilalao mandrombaka medaly volamena eo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra. (Jereo Sary Tohiny)